Wasiir dowlihii arrimaha deegaanka oo kamid ah kuwa ku geeriyooday weerarkii huteel Naasahablood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiir dowlihii arrimaha deegaanka oo kamid ah kuwa ku geeriyooday weerarkii huteel Naasahablood
Wasiir dowlaha geeriyooday, Burci Maxamed Xamsa.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiir dowlihii dowlada federaalka Soomaaliya ee arrimaha deegaanka ayaa kamid ah ugu yaraan 17 qof kuwaasoo galabnimadii Sabtida ku geeriyooday gudaha huteel Naasahablood ee Muqdisho.
Wakaalada wararka Soomaaliya Sonna ayaa ku warantay in wasiir dowlaha uu joogay huteelka markii uu weerarka dhacay.
Waxaa la dhihi jiray wasiir dowlaha dhintay, Burci Maxamed Xamsa isagoo sidoo kale ahaa xildhibaan dowlada federaalka katirsan.
Kooxda ku xiran ururka al-Qaacida ee al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas.
July 5, 2018 Ugu yaraan 17 qof oo ku geeriyootay dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo maleeshiyo beeleed oo ka dhacay deegaanka Xaradheere